အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်း application! ဗားရှင်း3| Martech Zone
မှာမယုံနိုင်စရာအသင်း Postano Martech ဗားရှင်း ၃ နှင့်အတူကြီးမားသောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ကျော်လွန်၍ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဲဒါလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် အကောင်းဆုံး Marketing iPhone App ထွက်ရှိ (Android လာမယ့်)!
ပထမတစ်ခုက Facebook လိုဘယ်ဘက်အညွှန်းကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အလွန်ပါးလွှာသောပြန်လည်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်သည့်အခါကြည့်ရှုသူကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်စဉ်သင်ကြည့်ရှုလိုသောအမျိုးအစားသို့မဟုတ်မီဒီယာများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ Podcasts၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကို scroll လုပ်ရန်နှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းသည်လှပပြီးအလွန်အသုံးဝင်သော interface ဖြစ်သည်။
၃ လအတွင်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူ ဦး ရေကိုသုံးဆတိုးခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင် ၁၀၀၀ နီးပါးရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့အရင်ကရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်မိုဘိုင်း application အသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်စပ်စာရင်းဇယား အလွန်အထင်ကြီးကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်အခြားဖတ်ရှုခြင်းများ၊ ပိုမိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ပိုမိုနားထောင်ခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းများပြုလုပ်သည်။ Webtrends ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိုဘိုင်း application ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု!
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ WordPress နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာကိုမွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဟုဆိုလိုသည်။ Podcasts၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်ကဏ္categoryအလိုက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ site ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့်သောအခါအလိုအလျောက် update လုပ်သည်။ အက်ပ်များတွင်မိုဘိုင်းသတိပေးချက်များနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဆောင်းပါးများကိုသိမ်းဆည်းရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ Postano ဟာသူတို့မယုံနိုင်လောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mobile App ကိုယခု Download လုပ်ပါ။
ဤတွင်ရက်စွဲမှငါတို့၏ Stats ဖြစ်ကြသည်
Tags: android app ကိုiPhone app ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ်အက်ပ်မိုဘိုင်း application ကိုမိုဘိုင်းဘလော့ဂ်လျှောက်လွှာpostanopostano အက်ပလီကေးရှင်းဗားရှင်း 3wordpress မိုဘိုင်း app
ProPrompter - သင်၏ဝက်ဘ်ကင်မရာဖြင့်မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်း